Yesu ne N’abusuafo Tuu Kwan Kɔɔ Yerusalem | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
Yesu ne N’abusuafo Tuu Kwan Kɔɔ Yerusalem
YESU DII MFE 12 NO, ƆBISABISAA AKYERƐKYERƐFO NO NSƐM
YESU FRƐƐ YEHOWA “M’AGYA”
Ná osutɔbere adu, na na bere aso sɛ Yosef ne n’abusua, wɔn namfonom ne wɔn abusuafo tu kwan kɔ Yerusalem sɛnea na wɔyɛ no afe biara no. Ná wɔrekɔ Yerusalem akɔdi Twam afahyɛ sɛnea Mmara no kyerɛ no. (Deuteronomium 16:​16) Ɛfiri Nasaret rekɔ Yerusalem yɛ kilomita 120. Ɛdu afahyɛ bere no a, adagyew nnim koraa, na anigye nso deɛ, wɔfa no kwa. Ná Yesu adi mfe 12 saa bere no, na na n’ani agye paa sɛ ɔrekɔ afahyɛ no na wakɔhu asɔrefie no bio.
Yesu ne n’abusuafo deɛ, sɛ Twam Afahyɛ no du so a, ɛnyɛ da koro anaa nnanu asɛm. Sɛ wɔdi Twam no wie a, n’adekyee yɛ paanoo a mmɔreka nnim afahyɛ no mfitiaseɛ. Saa afahyɛ no, na wɔdi no nnanson. (Marko 14:​1) Ná afahyɛ mmienu no reyɛ abom. Sɛ Yesu ne n’abusuafo fi Nasaret kɔ Yerusalem kɔdi afahyɛ no a, wɔn korɔ ne wɔn ba ne nna dodow a wɔbɛdi wɔ hɔ nyinaa bɛyɛ nnawɔtwe mmienu. Nanso afe a yɛreka ho asɛm yi deɛ, Yesu nti wɔdi boroo saa. Bere a wɔkɔɔ Yerusalem a wɔresan aba no, wɔhuu sɛ asɛm reyɛ aba.
AKWANTU A ƐYƐ ANIKA
Ná Israelfo wɔ afahyɛ mmiɛnsa a wɔdi no afe biara, enti na wɔtu kwan kɔ Yerusalem mprɛnsa. Sɛ Yerusalem akwantu no du so a, na ɛnyɛ agorɔ koraa. (Deuteronomium 16:​15) Sɛ Yesu ne n’abusuafo retu kwan yi a, na Yesu tumi hu mmeaemmeae, na na ɔhu sɛnea asase no te. Ná ɔnya kwan hyia Yehowa asomfo pii a wɔfiri nkuro foforo so. Ná ɛyɛ akwantu a ɛyɛ anika paa!
Nea ɛte ne sɛ, wɔnam kwan so no, ɛyɛɛ Yosef ne Maria sɛ gyama Yesu ka wɔn abusuafo ne wɔn nnamfo a wɔne wɔn nam no ho. Nanso, ade sae a wɔyɛɛ sɛ wɔrepɛ baabi ada na ade kye a wɔatoa akwantu no so no, na wɔnhu Yesu. Enti wɔkɔhwehwɛɛ no wɔ akwantufo a aka no mu, nso ɔkwa. Ná wɔn ba no ayera ama anibere aba! Afei Yosef ne Maria san wɔn akyi kɔɔ Yerusalem kɔhwehwɛɛ no.
Wɔduu Yerusalem no, wɔkyini pɛɛ wɔn ba no da mu nyinaa, nanso wɔanhu no. Ade kyee nso, wɔtoaa so hwehwɛɛ no ara, wɔanhu no. Afei, ne nnansa so no, wɔkɔɔ asɔrefie hɔ kɔhwehwɛɛ no. Asɔrefie kakraka no ne emu adan bebrebe no, wɔwura ha, na wɔawura ha. Afei wɔnkɔhwɛ a, Yesu na ɔte Yudafo akyerɛkyerɛfo bi mfimfini retie wɔn bisabisa wɔn nsɛm yi. Sɛnea na ɔte nneɛma ase no maa akyerɛkyerɛfo no ho dwirii wɔn paa.
Maria bisaa Yesu sɛ: “Me ba, adɛn nti na woyɛɛ yɛn saa? Hwɛ, me ne wo papa de ahoyera ahwehwɛ wo.”​—Luka 2:48.
Ɛyɛɛ Yesu nwonwa sɛ n’awofo anhu baabi a ɔwɔ, enti ɔbisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mokyini hwehwɛ me? Monnim sɛ ɛtwa sɛ metena m’Agya fie anaa?”​—Luka 2:49.
Afei Yesu dii Yosef ne Maria akyi ne wɔn kɔɔ Nasaret, na ɔkɔɔ so brɛɛ ne ho ase maa wɔn. Ɔkɔɔ so nyini nyaa nyansa, na ne nkwadaaberem mpo, ɔnyaa nnipa ne Onyankopɔn anim dom. Enti ɛfiri Yesu mmɔfraase pɛɛ na ɔtwaa sa pa too hɔ maa nkyirimma, efisɛ wamfa Onyankopɔn som anni agorɔ, na ɔnyaa obu maa n’awofo nso.
Afe biara, sɛ ɛdu osutɔbere a, ɛhefa na na Yesu ne n’abusuafo taa tu kwan kɔ? Dɛn na na wɔkɔyɛ wɔ hɔ?
Yesu dii mfe 12 no, dɛn na ɛsii bere a Yosef ne Maria fi Yerusalem resan akɔ Nasaret no? Ɛhe na wɔkɔhuu Yesu?
Ɛsa pa bɛn na Yesu atwa ato hɔ ama mmofra a wɔwɔ hɔ nnɛ?